Ny Mandeha Amin’ny GV Radio Volana Jolay · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Jolay 2015 13:27 GMT
Sarin'ny Global Voices Radio nataon'i Kevin Rothrock
Tamin'ny May, natombokay tamin'ny fomba ofisialy ny fandefasana ny Global Voices Radio ho fomba iray hanasongadinana ireo votoaty manan-danja avy amin'ny vondrom-piarahamonin'ny GV sy avy amin'ireo mpiara-miasa aminay manerantany. Io onjampeo fandefasana streaming anaty aterineto io, izay azonao idirana amin'ny alàlan'ny solosainao na amin'ny fitaovana finday, dia manolotra antsafa, mozika erantany, na endrika feo hafa. Raha mbola eo ampitrandrahana hatrany ireo fahafahana isankarazany mandefa fandaharana izahay, sady mitady mpiara-miasa vaovao hamatsy feo, tianay ny hisarika ny sainareo ho amin'ireo fandaharana vaovao nalahatra sy nofinidy tamin'ny volana Jolay.
Fanomanana Fandaharan'ny Global Voices
Hitohy hanasongadina ireo podcasts tany aloha ny GV Radio izay manome topimaso ny asan'ny vondrom-piarahamonina midadasika misy anay. Asongadinay ihany koa ireo feo avy amin'ireo sombin-tantara navoitran'ny GV Face, toy ny resadresaka iray niarahana tamin'ny mpiara-manorina anay, Rebecca MacKinnon sy Ethan Zuckerman ho fankalazana ny faha-10 taonan'ny Global Voices. Ho fanampin'izany, misy ny resadresaka iray niarahan'ny Advox tamin'ireo mpikambana ao amin'ny vondrom-piarahamonina Tor, nomena anarana hoe “Demystifying the Onion Router.”
Ny fanomanana fandaharana dia ahitàna ny ampahany faharoa amin'ny Africa Cheza, podcast mozika afrikana iray nalahatr'i James Propa, mpikambana ato amin'ny vondrom-piarahamonina avy ao Ogandà, sy tafatafa iray notarihan'i Robert Valencia, mpikambana iray ao anatin'ny vondrom-piarahamonin'ny GV Amerika Latina, izay niresaka tamin'i Monica Carrillo momba ny toerana misy ny zon'ireo Afro-peroviana amin'izao fotoana izao.
Mpiara-miasa vaovao amin'ny resaka podcast
Hanohy hanasongadina ny votoaty avy amin'ireo mpiara-miasa nampidirina tao amin'ny lahatsoratray voalohany izahay. Ary noho ny fangatahan'ireo mpikambana ato amin'ny vondrom-piarahamonina GV, mahafaly anay ny manampy mpiara-miasa vaovao, toy ny Loa Podcast avy ao Vietnam:
Ny Loa dia podcast iray izay mitrandraka ireo hetsika, hevitra, ary tantara izay mandrafitra ny Vietnam amin'izao andro izao. Miaraha aminay amin'ny fitetezanay ireo olana amin'ny andro itrangàny, amin'ny alàlan'ireo fanehoankevitra feno fisaintsainana, fomba fijery misongadina, ary tafatafa amin'ny fo madio sy ny sisa, izany rehetra izany natao hahazo aina amin'ny alàlan'ny sary sy feo.
Asainay ianao hanao topimaso amin'ny fandaharana ho an'ny herinandro ho avy io, izay ho ampanarahana tsy tapaka ny zava-misy miaraka amin'ny fandaharana vaovao . Karohy ireo bitsika avy amin'ny kaonty Twitter-n'ny Global Voices (@globalvoices) ary miaraka amin'ny tenifototra #GVRadio milaza izay mandeha amin'io fotoana io. Azonao atao ny mihaino izany amin'ny alàlan'ilay fitaovana etsy ambony na tonga dia miditra mivantana ao amin'ny pejn'ny GV Radio. Misaotra anao mihaino ny GV Radio.